फेसबुकमा ‘फलैंचा संगीत’ को लाइभ कन्सर्ट
बन्दाबन्दीको समय सदुपयोग गर्न विभिन्न व्यक्ति र समूहले रचनात्मक कामहरू गरिरहेका छन्। यसैमध्येको एउटा हो फेसबुक कन्सर्ट 'फलैंचा संगीत'।
झन्डै एक वर्षअघि यूट्युबमा सार्वजनिक भएको यो गीतको लोकप्रियता यति छ, भ्यूज अहिले पनि निरन्तर बढिरहेको छ।
९ वर्षको उमेरमा शिक्षकबाट यौनशोषण सहन बाध्य रचना दाहालको संघर्षमय जीवन यात्रा भन्छ– सहनु होइन, प्रतिकार गर्नु वास्तविक उन्मुक्तिको बाटो हो।
साक्षात पन्तको ‘तर, म दलित’ सार्वजनिक ललितपुरस्थित ज्ञानोदय बालबाटिकामा कक्षा ९ मा अध्धयनरत १४ वर्षीय साक्षात पन्तले जातीय विभेद विरुद्ध र्‍याप गीत गाएका छन्।
प्रकाश सपुतको नयाँ गीत ‘बदला बरिलै’ एक दिनमै ट्रेन्डिङमा बलात्कारको विषयलाई लिएर गायक प्रकाश सपुते बनाएको 'बदला बरिलै' बोलको गीत यूट्युवमा राखेको एक दिनमा नै ट्रेन्डिङमा आएको छ।
बालयौनशोषणमा परेकी रचनाको गीत नर्वेजियन ब्याण्डसँग, भन्छिन् - गीतमार्फत पीडालाई शक्तिमा बदलें रचनाको गीतको शब्दमा उनी ललितपुरको एउटा विद्यालयमा ३ कक्षामा पढ्दा आफ्नै शिक्षकले गरेको यौन दुर्व्यवहार भोग्दाका पीडाहरू छन्। उनले त्यो अपराधलाई केही समय आफ्नो परिवार र साथीसँग लुकाइन् तर अरू पनि त्यसै गरी प्रताडित हुनुपरेको कुरा थाहा पाएपछि सार्वजनिक गरिन्।
‘अबको तीज नो व्रत प्लिज’ गीत हटाउन धम्की, गायिका पुगिन् प्रहरीमा तीजको सन्दर्भमा ल्याएको गीतले हिन्दु संस्कार र तीजको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै नहटाए भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की आएपछि गायिका सोफिया थापाले प्रहरी गुहारेकी छिन्।
विश्व संगीतमा नेपाली कर्टिस वाटर्सको सनसनी ‘स्टनिन्’ गीतको लोकप्रियतासँगै गीतसँगै काठमाडौंमा जन्मेको एउटा केटो अन्तर्राष्ट्रिय संगीतको नयाँ सनसनी बनिरहेको छ।
पूर्वमन्त्री कोइरालाको गीत बालगायक अग्रज भट्टराईको स्वरमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत बालक भट्टराईले पुराना गायकहरुको दर्जनौं गीत आफैं हारमोनियम बजाउँदै गाएर सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) र युट्युबमा राखेका छन् ।
आर्टमाण्डुले ल्यायो एकापेला गीत आर्टमान्डुले ‘लकडाउन सङ’ युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । पिँजडाको चरा’ शीर्षकको उक्त एकापेला गीतमा अंकितबाबु अधिकारी र सप्तक दुतराजले स्वर दिएका छन्। कुनै वाद्यवादन प्रयोग नगरी मुखबाटै विभिन्न धुन निकाल्ने संगीतको विधालाई एकापेला भनिन्छ।
'म रत्नशम्शेर थापा, र अहिले म ज्युँदै छु !' स्वाभिमानी र सिर्जनशील जीवन बिताएका कवि एवं गीतकार रत्नशम्शेर थापा नेपाली सुगम संगीतको आकाशमा चम्किलो रत्नसरि रहनेछन्।
कोरोना संक्रमणबाट बलिउड संगीतकार वाजिद खानको निधन बलिउडका गायक तथा संगीतकार वाजिद खानको निधन भएको छ। मिर्गौलाको समस्याबाट पीडित उनमा एक साताअघि कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।
जो अम्बरका पनि ‘रत्न’ थिए ! रत्नशमशेर थापा ती गीतकार हुन्, जसका सबभन्दा बढी २५ वटा गीतमा गुरुङले संगीत भरे । फुटकर त छँदैछन्, स्वप्निल आँखाभरि देखि शुरु भएको यो दोस्ती दोभान र स्वराञ्जली क्वायरसम्म सघन भयो । “मलाई रत्नशमशेर थापा र अरुणा लामासँग गरेका काम सबभन्दा प्रिय लाग्छन्”, गुरुङले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ।
अमेरिकन आइडलको उपविजेता बने दिवेश, उपाधि जस्ट सामलाई नेपाली मूलका दिवश पोखरेल १९औँ अमेरिकन आइडलको उपविजेता बनेका छन् । उत्कृष्ट दुईमा सामले भोटको आधारमा दिवेशलाई पछाडि पारेकी हुन् । लाइबेरियन मूलकी सामलाई जिताउन लाइबेरियामा अभियान नै चलाइएको थियो ।
दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको शीर्ष १० मा नेपाली युवा दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको शीर्ष १० मा पुगेका छन् । जोन डेनभरको चर्चित गीत ‘कन्ट्री रोड’ गाउँदै उनी शीर्ष १० पुगेका हुन् ।
नेपथ्यको पुरानो गीतमाअष्ट्रेलियाको दृश्य
झण्डै अढाइ दसकअघि संकलन गरिएको र १७ वर्षअघि सार्वजनिक भएको नेपथ्यको एउटा पुरानो गीतले पहिलोपटक दृश्य पाएको छ ।
क्‍वारेन्टिनमा जन्मिंदै नयाँ गीतहरू
बन्दाबन्दीका कारण संगीतकर्मीहरुको नियमित सिर्जना कर्म यतिवेला बिथोलिएको छ। यो स्थितिमा संगीतप्रेमीहरुले नयाँ गीत सुन्न कहिले पाउलान् त ?
नेपथ्यको ‘छोटो गीत’ अब युट्युबमा
नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा नेपथ्यले आफ्ना पुराना गीतहरुमध्ये सन् २००३ मा रिलिज भएको एल्बम ‘भेँडाको ऊनजस्तो’बाट एउटा गीत छनौट गरेको छ । थोरै अवधिको भएकैले ‘छोटो गीत’ नाम दिइएको यस पुरानो गीतका श्रोताहरुले अब आफूलाई यसका दर्शक पनि बनाउनसक्ने भएका छन् ।
बन्दाबन्दीमा सेलिब्रिटीको समय पाएपछि रमाउँदै परिवार कोभिड १९ को महामारीले विश्वभरी भयावह रुप लिएपछि नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउँदै सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) घोषणा गरेको छ। महामारीका कारण भोग्नु परेको यो बाध्यता कलाकारहरूका लागि पारीवारिक समय व्यतीत गर्ने बहाना बनेको छ।
बन्दाबन्दीमा 'रिदम ब्यान्ड'को फेसबुकमा लाइभ कन्सर्ट बन्दाबन्दीमा घरभित्रै बसेर समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ ? यदि त्यो हो भने गायक दीपक बज्राचार्यको ब्यान्ड रिदमले हिजोदेखि यूट्युब र फेसबुकमा लाईभ कन्सर्ट गरिरहेको छ ।
सनी रौनियारको नयाँ गीत ‘खुल्ला आकाश’ सार्वजनिक ‘प्रेमपिण्ड’ चलचित्रकी अभिनेत्री सनी रौनियार लामो समय पश्चात पुनः ‘खुल्ला आकाश’ नामक गीत लिएर श्रोता र दर्शकमाझ आएकी छिन् ।
सबिन राईको कन्सर्ट सहित ‘टुबोर्ग ललितपुर ट्याटु कन्भेन्सन’ सम्पन्न नेवार, तामाङ, थारू आदि समुदायमा ट्याटु खोप्नुलाई संस्कृतिका रूपमा अनुसरण गरिन्छ । संस्कृतिका रूपमा हुर्केको ट्याटु अहिले युवा पुस्ता माझ फेसनको रुपमा बढ्दो छ।
बङ्गाली स्वर, नेपाली धुन नेपाली संगीतसँग मुखर्जीको विशेष लगाव छ । बाजाहरूप्रति पनि चाख छ । योसँगै उनलाई नेपाली लोक सङ्गीतको भावभूमि पनि थाहा छ ।
नेपाली ठिटो दिवेश ‘अमेरिकन आइडलको अहिलेसम्मकै ठूलो स्टार बन्नसक्ने’ आइतबार भएको ‘अमेरिकन आइडल’को अडिसनमा छनोटसँगै एकाएक चर्चित नेपाली युवा दिवेश पोखरेल (अर्थर गन) सन् २०१४ मा उच्च अध्ययनका लागि काठमाडौंबाट अमेरिका पुगेका थिए ।
आस्था राउतलाई हिरासतमा लिदा धुमिल बन्याे प्रहरी छबि एक मात्र शब्द ‘माफी’ बाट हल हुनसक्ने सामान्य भनाभन फौजदारी अपराध सरह मानेर आस्थालाई हिरासतमा लिने रवैयाले प्रहरीकै छवि धुमिल बनेको छ।
आफ्नै शब्द, संगीतमा गीत ल्याउने तयारीमा बुद्ध लामा
पहिलो नेपाल आइडल बन्न सफल बुद्ध लामा अहिले आफ्नै शब्द संगीतमा नयाँ गीत दर्शकलाई पस्कने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।